Uhlu lwama-Inch lwe-Inch Rayson
Le matilasi i-Taghtx Pocket Matiss engcono kakhulu ngokuqina okungcono kunematilasi ajwayelekile.Latex yi-anti-mite kanye namagciwane ane-anti-bacteria, futhi lokhu kunesifiso sokuqinisekisa indawo enhle yokulala. ukusebenza okungcono.
Ukuqondiswa okusha kwesayensi kanye nezobuchwepheshe, iRayson ihlala ihlala igxile ngaphandle futhi inamathela ekukhuleni okuhle ngesisekelo sokwenziwa kobuchwepheshe. I-10 inch entwasahlobo umatilasi namuhla, iRaysonon ibeka phezulu njengomhlinzeki ochwepheshe futhi onolwazi embonini. Singahle siklame, sithuthukise, sikhiqize, futhi sithengise uchungechunge lwemikhiqizo eyehlukene ngokwethu sihlanganisa imizamo nokuhlakanipha kwabo bonke abasebenzi bethu. Futhi, sinesibopho sokunikela ngezinsizakalo ezahlukahlukene zamakhasimende kufaka phakathi ukwesekwa kwezobuchwepheshe kanye nezinsizakalo ezisheshayo ze-Q & A. Ungathola okuningi ngomkhiqizo wethu omusha we-10 inch Spring Matress kanye nenkampani yethu ngokuxhumana ngqo nathi.Umkhiqizo ulungele kakhulu izembatho ezingezona ezinobuthi, ezihlala njalo.